HIV ပိုး ကြှနျတော့တှငျ ရှိနပွေီ | OnDoctor
HIV ပိုး ကြှနျတော့တှငျ ရှိနပွေီ
By OnDoctor Editor	 On Aug 20, 2016 Last updated Nov 9, 2019
မေး။ ကျွန်တော့အသက် (၂၅) နှစ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်မရှိလူပျိုပါ။ ကျွန်တော့် အရင် အလုပ်က နယ်ဘက်တွေကိုမားကက်တင်းအမြဲဆင်းရပါတယ်။တခါတလေလည်းအပျော်အပါးလိုက်စားမိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ် လောက်ကနီးစပ်တဲ့ညီငယ်တစ်ယောက်
Car Accident ဖြစ်တာ သွေးလိုလို့ သွေးအမျိုးအစား ကိုက်တာနဲ့ လှူမယ်ဆိုပြီး သွေးစစ်ကြည့်တော့ HIV ပိုးရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ပိုပြီး သေချာသွားအောင် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲခန်းကိုလည်း သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ positive ပါပဲ။ HIV ရောဂါပိုးရှိနေတဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်ပါသလဲ?
ဖြေ။ HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူနဲ့ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါသည် (AIDS) ရောဂါသည် ဆိုတာ တကယ်တော့ မတူပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ဟာ HIV ပိုးရှိနေပေမယ့်လည်း သာမန်လူတစ်ယောက်လိုပဲလှုပ်ရှားသွားလာလို့ရပါတယ်။အပြင်ပန်းကြည့်ရုံနဲ့ ရောဂါပိုးရှိနေမှန်းခွဲခြားမသိနိုင်ပါဘူး။ သွေးစစ်ကြည့်မှသာသိရတာမျိုးပါ။လူတစ်ယောက်ဟာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရပြီဆိုတာနဲ့ တပြိုင်နက် သူ့ရဲ့သက်တမ်းတလျှောက် လုံးရောဂါပိုးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ AIDS ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်ရောက်ပြီးဘဝဆုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါသည်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိမလဲဆိုတာကတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီနိုင်ပါဘူးအစားအသောက်၊ အနေအထိုင်နဲ့ ကိုယ်ခံအားအပြင် ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားသောဆေးဝါးများကိုသောက်သုံးမှု စသည်တို့အပေါ်မှာလည်းမူတည် ပါတယ်။
မိမိမှာ HIV ပိုးရှိနေပြီလို့ သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် မဆိုင်းမတွ လုပ်သင့်တာက နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ ကုမှုခံယူပါ။ အချိန်မှန်မှန် တွေ့ဆုံပြီးအကြံဉာဏ် လမ်းညွှန်မှုတွေ ရယူပါ။ လိုအပ်လို့ တိုက်ကျွေးတဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုလည်း အချိန်မှန်မှန်သောက်ရပါမယ်။ HIV ပိုးရှိတဲ့လူဟာသွေးမှတစ်ဆင့် တခြား သူတွေဆီ ကူးစက်နိုင်တာကြောင့် သွားတိုက်တံများ၊မုတ်ဆိတ်ရိတ်တံများကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူမျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုရပါဘူး။သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်း သွေးလှူဒါန်းခြင်းလည်းမလုပ်ရပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံရာမှ တဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်တဲ့ အတွက် HIV ပိုးစတင်တွေ့ရှိတာနဲ့ တပြိုင်နက် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိန်းသိမ်း သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လိင်ဆက်ဆံဖြစ်တော့မယ် ဆိုလျှင်လည်းမလွဲမသွေ အရည် အသွေး ကောင်းသောcodom ဆောင်ပါ။အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။HIV ရောဂါပိုးရှိသူတစ်ယောက်ဟာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများကိုတခုခုထိခိုက်မိလို့ဖြစ်စေ၊ အခြားရောဂါ တခုခုကြောင့် ဖြစ်စေသွားရလျှင်လည်း ကုသမယ့်ဆရာဝန်ကိုမိမိမှာ ရောဂါပိုးရှိကြောင်းကြိုတင်အသိပေးထားရမှာပါ။ဒါမှသာတခြားလူတွေဆီမကူးစက်နိုင်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
1981 ခုနှစ်ရောဂါပိုးကိုစတင်သတိထားမိတဲ့အချိန် ကစပြီးယနေ့အချိန်ထိ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်အတွင်းသုတေသနပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးAIDS ရောဂါကိုကာကွယ်ရန်၊ကုသရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသော်လည်းပဲအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သောနည်းလမ်းမပေါ်သေးပါ။ယခုလက်ရှိသုံးစွဲနေသောဆေးဝါးများသည် HIV ရောဂါပိုးကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမပွားအောင် ထိန်းပေးနိုင်သောဆေးဝါးများသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ မိမိကိုယ်ကိုအစားအသောက် အနေအထိုင် အသွားအလာအပြုအမူစိတ်နေစိတ်ထားအစစအရာရာဂရုစိုက်ပြီး နေထိုင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မလွှဲရှောင်နိုင်သောကံအကြောင်းတရားကြောင့် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီဆိုပါကလည်းစိတ်ဓာတ်မကျပဲကျန်းမာရေးကိစ္စတွေမှာအထူးဂရုစိုက်၍တတ်နိုင်သမျှမိမိနဲ့ဘဝတူမိမိထက်ဗဟုသုတနည်းပါးသူတွေကို ဖေးမရင်းဘဝခရီးလမ်းတစ်လျှောက် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းခြင်းသည်သာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမည်။
Author – ဒေါက်တာအေးချမ်းမိုး
မေး။ ကြှနျတော့အသကျ (၂၅) နှဈရှိပါပွီ။ အိမျထောငျမရှိလူပြိုပါ။ ကြှနျတေျာ့ အရငျ အလုပျက နယျဘကျတှကေိုမားကကျတငျးအမွဲဆငျးရပါတယျ။တခါတလလေညျးအပြျောအပါးလိုကျစားမိပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈပတျ လောကျကနီးစပျတဲ့ညီငယျတဈယောကျ
Car Accident ဖွဈတာ သှေးလိုလို့ သှေးအမြိုးအစား ကိုကျတာနဲ့ လှူမယျဆိုပွီး သှေးစဈကွညျ့တော့ HIV ပိုးရှိနတောတှရေ့ပါတယျ။ ပိုပွီး သခြောသှားအောငျ ရနျကုနျမှာရှိတဲ့ အမြိုးသားကနျြးမာရေး ဓာတျခှဲခနျးကိုလညျး သှားရောကျ စဈဆေးခဲ့ပါတယျ။ positive ပါပဲ။ HIV ရောဂါပိုးရှိနတေဲ့ သူတဈယောကျအနနေဲ့ ဘယျလိုပွုမူနထေိုငျသငျ့ပါသလဲ?
ဖွေ။ HIV ရောဂါပိုးကူးစကျခံထားရသူနဲ့ ခုခံအားကဆြငျးမှုရောဂါသညျ (AIDS) ရောဂါသညျ ဆိုတာ တကယျတော့ မတူပါဘူး။ လူတဈယောကျဟာ HIV ပိုးရှိနပေမေယျ့လညျး သာမနျလူတဈယောကျလိုပဲလှုပျရှားသှားလာလို့ရပါတယျ။အပွငျပနျးကွညျ့ရုံနဲ့ ရောဂါပိုးရှိနမှေနျးခှဲခွားမသိနိုငျပါဘူး။ သှေးစဈကွညျ့မှသာသိရတာမြိုးပါ။လူတဈယောကျဟာ HIV ပိုးကူးစကျခံရပွီဆိုတာနဲ့ တပွိုငျနကျ သူ့ရဲ့သကျတမျးတလြှောကျ လုံးရောဂါပိုးဟာ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာရှိနပွေီးနောကျဆုံးမှာတော့ AIDS ရောဂါဝဒေနာရှငျတဈယောကျအဖွဈရောကျပွီးဘဝဆုံးရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ဘယျအခြိနျမှာခုခံအားကဆြငျးမှုရောဂါသညျအဖွဈသို့ ရောကျရှိမလဲဆိုတာကတော့လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျမတူညီနိုငျပါဘူးအစားအသောကျ၊ အနအေထိုငျနဲ့ ကိုယျခံအားအပွငျ ဆရာဝနျမှ ညှနျကွားသောဆေးဝါးမြားကိုသောကျသုံးမှု စသညျတို့အပျေါမှာလညျးမူတညျ ပါတယျ။
မိမိမှာ HIV ပိုးရှိနပွေီလို့ သိလိုကျတာနဲ့တပွိုငျနကျ မဆိုငျးမတှ လုပျသငျ့တာက နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျတဈယောကျနဲ့ ကုမှုခံယူပါ။ အခြိနျမှနျမှနျ တှဆေုံ့ပွီးအကွံဉာဏျ လမျးညှနျမှုတှေ ရယူပါ။ လိုအပျလို့ တိုကျကြှေးတဲ့ ဆေးဝါးတှကေိုလညျး အခြိနျမှနျမှနျသောကျရပါမယျ။ HIV ပိုးရှိတဲ့လူဟာသှေးမှတဈဆငျ့ တခွား သူတှဆေီ ကူးစကျနိုငျတာကွောငျ့ သှားတိုကျတံမြား၊မုတျဆိတျရိတျတံမြားကိုလညျးမိသားစုဝငျတှနေဲ့အတူမြှဝသေုံးစှဲခွငျးမပွုရပါဘူး။သိပွီးသားဖွဈတဲ့အတိုငျး သှေးလှူဒါနျးခွငျးလညျးမလုပျရပါဘူး။ လိငျဆကျဆံရာမှ တဆငျ့လညျး ကူးစကျနိုငျတဲ့ အတှကျ HIV ပိုးစတငျတှရှေိ့တာနဲ့ တပွိုငျနကျ ကိုယျကငျြ့တရားကို ထိနျးသိမျး သငျ့ပါတယျ။ တကယျလို့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ လိငျဆကျဆံဖွဈတော့မယျ ဆိုလြှငျလညျးမလှဲမသှေ အရညျ အသှေး ကောငျးသောcodom ဆောငျပါ။အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။HIV ရောဂါပိုးရှိသူတဈယောကျဟာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးမြားကိုတခုခုထိခိုကျမိလို့ဖွဈစေ၊ အခွားရောဂါ တခုခုကွောငျ့ ဖွဈစသှေားရလြှငျလညျး ကုသမယျ့ဆရာဝနျကိုမိမိမှာ ရောဂါပိုးရှိကွောငျးကွိုတငျအသိပေးထားရမှာပါ။ဒါမှသာတခွားလူတှဆေီမကူးစကျနိုငျအောငျ ကာကှယျနိုငျမှာပါ။
1981 ခုနှဈရောဂါပိုးကိုစတငျသတိထားမိတဲ့အခြိနျ ကစပွီးယနအေ့ခြိနျထိ နှဈပေါငျးသုံးဆယျကြျောအတှငျးသုတသေနပေါငျးမြားစှာလုပျပွီးAIDS ရောဂါကိုကာကှယျရနျ၊ကုသရနျကွိုးပမျးခဲ့ကွသျောလညျးပဲအမွဈပွတျပြောကျကငျးအောငျကုသနိုငျသောနညျးလမျးမပျေါသေးပါ။ယခုလကျရှိသုံးစှဲနသေောဆေးဝါးမြားသညျ HIV ရောဂါပိုးကို ခန်ဓာကိုယျထဲမှာမပှားအောငျ ထိနျးပေးနိုငျသောဆေးဝါးမြားသာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့မို့လို့ မိမိကိုယျကိုအစားအသောကျ အနအေထိုငျ အသှားအလာအပွုအမူစိတျနစေိတျထားအစစအရာရာဂရုစိုကျပွီး နထေိုငျခွငျးသညျအကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။မလှဲရှောငျနိုငျသောကံအကွောငျးတရားကွောငျ့ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရပွီဆိုပါကလညျးစိတျဓာတျမကပြဲကနျြးမာရေးကိစ်စတှမှောအထူးဂရုစိုကျ၍တတျနိုငျသမြှမိမိနဲ့ဘဝတူမိမိထကျဗဟုသုတနညျးပါးသူတှကေို ဖေးမရငျးဘဝခရီးလမျးတဈလြှောကျ ဆကျလကျလြှောကျလှမျးခွငျးသညျသာအကောငျးဆုံးဖွဈပမေညျ။
Author – ဒေါကျတာအေးခမျြးမိုး